Iindiza ezisuka eHawaii zisiya kwiAmerican Samoa kwiiHawaiiian Airlines ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Iindiza ezisuka eHawaii zisiya kwiAmerican Samoa kwiiHawaiiian Airlines ngoku
Airlines • isikhululo • Iindaba zaseMelika yaseSamoa eziziiNdaba • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelo-moya zaseHawaii ziqala kwakhona inkonzo engapheliyo phakathi kukaDaniel K. Inouye waseHonolulu kunye neenqwelomoya zeAmerican Samoa ePago Pago ngeenqwelo moya zayo zeAirbus A330.
Iinqwelo-moya zaseHawaii ziphinda ziphinde zibuyele eAmerican Samoa.
Iinqwelo-moya zaseHawaii ziya kubonelela ngeenqwelomoya ezimbini ngenyanga.
Indlela eya eHawaii ukuya eAmerican Samoa iya kubonelelwa ngeenqwelo moya zeHawaiiian Airlines A330.
Iinqwelo-moya zaseHawaii ziphinde zadibanisa I-Honolulu (HNL) kunye neAmerican Samoa (PPG) ngokuqhuba iinqwelomoya ezingapheliyo phakathi kweHawaii kunye ne-US Territory kwiveki ezayo. I-Hawaiian, eyamisa inkonzo ye-HNL-PPG kabini ngeveki ekuqaleni kwesibetho se-COVID-19 ngo-Matshi 2020, izakube inikezela ngeenqwelomoya ezimbini ngenyanga ukuqala ngoMvulo ukuya kuDisemba 20.
"Siyavuya ukubuyisela iAmerican Samoa kwinethiwekhi yethu kwaye samkela iindwendwe ezilinde ngomonde iindiza zethu ukuba ziqale ngokutsha," utshilo uBrent Overbeek, usekela mongameli omkhulu kucwangciso lwenethiwekhi kunye nolawulo lwengeniso e Airlines eHawaii. "Njengabamelwane besiqithi sePasifiki, siyayiqonda indlela iindwendwe zethu ezithembele ngayo kwinkonzo yethu kwaye sijonge phambili ekunxibelelaniseni ngokukhuselekileyo usapho kunye nabahlobo."
IHawaii, ebonelela ngesiqhagamshelo somoya esihlala sihleli phakathi kwamatyathanga amabini esiqithi, amise iinqwelomoya kangangeenyanga ezili-17 ngokwesicelo sikarhulumente waseAmerican Samoa. Nge-13 kaJanuwari, i-Hawaiian yaqala ukusebenza uthotho lweenqwelomoya zokubuyela kwilizwe labo ukuzisa e-American Samoa amawaka abahlali ababethinjwe kude nekhaya labo eHawaii, kwilizwekazi laseMelika nangaphaya.
Abahambi abaya eAmerican Samoa kufuneka balandele uthotho lweenkqubo zikarhulumente zempilo kunye nezokhuseleko, kubandakanya ubungqina bokugonywa kunye neziphumo zovavanyo zangaphambi kokuhamba. Iinkcukacha ezithe kratya ziyafumaneka kwiwebhusayithi ye-TALOFApass. Iindwendwe ezibhabhela eHawaii ziyacelwa ukuba zenze imeko yeHawai'i Safe Travels akhawunti kwaye zilayishe ikhadi labo lokugonya okanye uvavanyo olubi ngaphambi kokuhamba ukuthintela ukubekwa bodwa ekufikeni kwabo.
IHawaiian iya kuqhubeka nokuqhuba umzila ngeenqwelo-moya zayo ezingama-278, umzimba omkhulu we-Airbus A330.